Chii chaunoda kuziva nezve Semalt
Nhasi, zvakaoma kuwana muridzi wesaiti angadai asina kunzwa nezveSemalt. Nekuti neimwe nzira kana imwe, vanhu vanofanirwa kubata ne SEO optimization. Iko kusimudzirwa kwewebsite mune yekutsvaga injini kunova iyo inonyanya kukurukurwa nyaya. Semalt yakazvimisa semutungamiri mukusimudzirwa kwewebsite uye yave ichiratidza kukunda kwayo munzvimbo ino kwemakore gumi.
Aya haasi mazwi asina basa, chokwadi chose chakasimbiswa nehuwandu hwechiratidzo chekubudirira kwemapurojekiti. Mazana evatengi anonyora zvakanaka nezvekushanda nesu nekuti makambani avo akazotanga kubudirira. Vese vakwikwidza vakasara vari kumashure vasina kana mukana mumwe wekubata nekwavo chinzvimbo mukutsvaga injini. Izvo zvinova pachena kuti iyo SEO optimization haigoneke pasina Semalt, uku ndiko kusarudzika kwedu uko nyanzvi dzemhando yepamusoro dzichitora basa. Kunze kwezvo, isu hatina nguva yekuzorora pane edu laurels, isu tinovandudza nzira dzedu zuva nezuva nekupa vatengi zvigadzirwa zveSEO matekinoroji. Tiri kubuda, uye bhizinesi rako riri kuvandudza pamwe nesu.
Isu tinofanirwa kubhadhara mutero kuchikwata chedu, chaisanganisira mamaneja ane ruzivo, nyanzvi dzeT, nyanzvi dzeSEO, vanyori vekunyora uye mamaneja ekushambadzira. Tinogona kuvimbisa iwe ipapo, hapana nzvimbo yevanyori paSemalt. Nyanzvi yega yega ine ruzivo rwakakura mune SEO-kukwidziridzwa, kugona kufunga zvine hunyanzvi uye nguva dzose kunotarisisa kubudirira.
Tarisa uone nyaya chaidzo dzinoratidzwa pawebsite yedu. Iwe ucharohwa nehuwandu hwesaiti dzatakaburitsa kubva mumatambudziko akakura. Tinoshanda nechero webhusaiti uye tinovachengetedza kubva mukudonha kuri kuda kuitika. Zvichida, vanhu vazhinji vanofarira matekiniki uye musimboti webasa redu. Chinyorwa ichi chinokuudza maitiro atinoita kuti uve mukupedzisira-magumo, uye nei Semalt iriyo kambani chete inovimbisa kubudirira kwako.
Izwi rekuti SEO rinoshandiswa kureva webhusaiti nekuda kwezvinodiwa nemainjini ekutsvaga. Semuenzaniso, mushure mekugadzira sosi yeInternet yakagadzirirwa kutengeswa kwechimwe chinhu kana sevhisi, zvinodikanwa kuunza ruzivo nezvazvo kune iyo nhamba yakakwana yenhengo dzevateereri vanotarirwa.
Kunyangwe avo vashandisi vari kutsvaga izvo zvigadzirwa kana masevhisi havazokwanise kuvaona mune izvo zvekutsvaga mhinduro kusvikira webhusaiti iri pamapeji ekutanga einjini yekutsvaga. Iwe unogona kuita izvi ne SEO optimization. Nekuda kwekuti vatengi vari kuwedzera kutenga zvinhu uye mabasa paInternet, chero bhizinesi ikozvino rinoda kukurudzira kwekutsvaga.
Dzese nzira dzinoshandiswa neSEO kusimudzira kwewebhu webhusaiti pasi rose yakakamurwa kuita nzira dzekunze uye dzemukati. Mune yekutanga kesi, mashandiro anoitwa uchishandisa wechitatu-bato online zviwanikwa, chechipiri - mukati mewebhu webhusaiti. Chinangwa chikuru chekunze kwekunze ndeyekuburitsa zvirimo kunze kwewebsite yekambani. Izvi zvinopa yakawanda traffic uye inogamuchirika sosi yewebhu inosimudzirwa webhusaiti, pamwe nekubatsira mukuvandudzwa kwenzvimbo mune yekutsvaga injini. Mitsara mikuru yerudzi urwu rwekusimudzira:
kunyoresa mumabhuku ezvinyorwa;
kuburitsa kuburitswa kwenhau uye zvinyorwa pane vamwe vanhu internet mapuratifomu.
Yemukati SEO optimization ye webhusaiti inosanganisira aya anotevera marudzi ebasa:
kugadzira yakasarudzika uye yepamusoro-zvemhando zvemukati;
kusarudza mazwi akakosha uye kuatumira zvakaringana muzvinyorwa.
Izvo Semalt zvinopa
Isu takagadzira seti yezviyero zvakagadzirirwa kuwedzera kutenderera kwewebsite yako uye kuoneka kwayo. Aya maviri mabasa anodikanwa anotsanangudza SEO kusimudzira. Kuti uwedzere kushanda kwemhando yepamusoro, mhinduro dzakasiyana dzakagadzirwa - AutoSEO uye FullSEO. Aya mashandiro akasarudzika aunokwanisa kuwana mibairo munguva ipfupi. Kupfuurirazve, tichafunga nezvazvo zvakakwana, asi zvino ngationgororei izvo zviri kuita Semalt zvechokwadi. Heano edu makuru mazano:
vhidhiyo yekusimudzira yebhizinesi rako.
AutoSEO mushandirapamwe naSemalt
AutoSEO ndiyo nhamba yenhanho dzakatorwa kuti uise webhusaiti yako kune yepamusoro nzvimbo yeinjini yekutsvaga. Izvo zvakakosha kuti unzwisise nzira iyi nenzira kwayo. Izvi hazvisi zvemashiripiti wand, asi zvine chinangwa zviito zvekambani yedu mukati megadziriro yeSEO-optimization. Tenda, kuvapo kwepani hakuvimbise soup inonaka, saka basa racho rakabatanidzwa nenyanzvi dzehunyanzvi hwakasiyana. AutoSEO mushandirapamwe inogona kungobereka chete kuburikidza neinopindirana mutengi kushandira pamwe nechikwata cheSemalt. Heano izvo AutoSEO inosanganisira:
Ikozvino tsungirira uye ona kuti zvinotaridzika sei mukuita. Izvo zvese zvinotanga nekunyoresa pane webhusaiti yedu. Tevere, zvese zvinoitwa neyekuvandudza saiti, iyo inonyatsoongorora chimiro chewebsite maererano nemitemo yeSEO. Iwe unowana ruzivo rwese rwakakosha muchimiro chemishumo nerondedzero yezvikanganiso izvo zvinofanirwa kugadziriswa. Kubva pane kuongororwa, iyo injinjini yeSEO inosarudza yakakodzera mazwi ayo ayo anogona kuwedzera webhusaiti yekupinda traffic.
Nhanho inotevera kuisa intaneti zvinongedzo muzvinhu zvakasiyana zvepa online. Zvemukati zvinofanirwa kuenderana nezvinongedzo uye zvinotakura semantic kukosha. Maitiro acho anogara achitariswa nemaneja wedu, uyo anoteya chinzvimbo chezvibatanidzwa muinjini yekutsvaga. Iwe hauzotofanira kunetseka nezve chimwe chinhu, zvese zviri pasi pekutonga kuzere mukushambadzira. PaInternet link zviwanikwa zvinosarudzwa nekunyatso, saka mukana wekupinda mune zvisina basa runyorwa hausi kunze.
Nekuwana kweFTP (File Transfer Protocol), Semalt nyanzvi dzinoita shanduko dzinoratidzwa pakutanga pane webhusaiti mushumo. Izvi shanduko zvinotungamira kune webhusaiti optimization maitiro. Basa raSemalt panguva ino rinosanganisira kuburitsa kwemazuva ese, nekuunza mazwi matsva anoenderana nezviri mukati. Kubatsira kwe AutoSEO ndeyekuti mushandirapamwe unoitwa uine kushoma kana kusava nebasa kwevashandisi, asi iwe unogara uchiziva zvese zvinoitika. Mwedzi wega wega AutoSEO package inodhura madhora makumi mapfumbamwe.
Chii chinonzi FullSEO
Kuti unzwisise zviri nani iyi SEO optimization system, tinokupa kuti uzvizive nezvako nemaitiro eSpainSEO, ayo ane chinangwa chekuwedzera chiyero chewebsite mune yekutsvaga injini. Musiyano ne AutoSEO ndeyekuti mhedzisiro inowanikwa munguva pfupi. Iyo nheyo ndeyemukati uye yekunze optimization, inoitwa nenyanzvi yeSEO. Nekuda kweizvozvo, kanzuru yeFSSEO haingobvumidza chete kutora chinzvimbo chepamusika, asiwo kusundira vakwikwidzi kushamisika.
FullSEO mushandirapamwe maficha
YeseSEO kampeni inotanga kubva panguva yaunosayina. Kunyatso kuongorora kwewebhu webhusaiti kunoitwa, nekuburitswa kwemushumo unotevera. Tevere, nyanzvi yeSEO inogadzira semantic resolution yeyako saiti, inotarisa iyo kugadzirisa uye inoratidza semantic musimboti. Nekuda kwekutarisirwa, zvese zvikanganiso zvinoda kugadziriswa kuti zvienderere mberi zvinowanikwa. Ipapo inguva yekutsanangura akakodzera mazwi ekuwedzera traffic. Saka, saiti inowanikwa mukati mekunze pamatanho ese. Mushure mekupinda muFTP, nyanzvi ichaita shanduko dzinodiwa dzakataurwa mushumo.
Iyo inotevera nhanho ichave yekunze optimization. SEO nyanzvi dzinoisa zvinongedzo mune niche zviwanikwa zvinoratidzira hukoshi hwezvinhu zvako. Nekufamba kwenguva, izvi zvinongedzo zvinotanga kuunza mhedzisiro yewebsite. Pa account yeSemalt, kune nhamba yakakura yenzvimbo dzakasimbiswa iwe dzaunogona kushanda nezvibereko, dzese kuti ubatsirwe nekubudirira kwesaiti yako. FullSEO yekushambadzira iri zvakare pasi pekutariswa nenyanzvi kutariswa, pane nguva nekugadziriswa kwemashoko akakosha, kana zvichidikanwa. Kuti uchengetedze iwe kusvika parizvino pamwe nekushandurwa kwese uye kukura kuri muyero yepasiti, zvakadzama mishumo pane yako webhusaiti mamiriro mune yekutsvaga injini inunurwa. Kuita uku kuri kutenderera nguva, saka hazvigoneke kupotsa chero nguva yakakosha.
Dzimwe nguva zvinoitika kuti nekuda kwechimwe chikonzero iwe unofanirwa kumisa SEO kukurudzira. Muchiitiko ichi, Google inowanzo bvisa zvese backlinks kubva mudura re data mushure mechinguva. Nzvimbo dzichangoerekana dzatanga kudonha nekukurumidza, asi usanetseka zvakaoma, ivo vanoramba vari mune imwe chinzvimbo zvakadaro. Ichi chinzvimbo chichava chakanyanya kukwirisa kupfuura chaimbova chekumhanyisa FullSEO mushandirapamwe. Pakati pezvose, chero SEO-optimization ndeye munhu mumwe, saka zvakaoma kuziva mutengo we FullSEO yekushambadzira isati yenyanzvi SEO yakatarisa webhusaiti yako zvakadzama.
Chii chinonzi Analytics
Semalt inopawo SEO optimization kuburikidza neAdhutta. Mune mamwe mazwi, ibasa rekuongororwa kwakadzama kwewebsite nekugadzirwa kwemishumo yakatsanangurwa. Ziva kuti pamusoro pekuongororwa kweiyo webhusaiti, inoongorora nzvimbo dzevanokwikwidza, kuunganidza mazwi ekugadzirisa iwo semantic musimboti webhusaiti, pamwe nekuvaka chimiro chemakwikwi emhando. Analytics inopa zvinotevera:
Iko kuunganidzwa kwe data yekuongororwa kunotanga nekukurumidza iwe paunenge uchinyoresa pane yedu webhusaiti. Izvi zvinoitika zvoga, pese paunopedza kuunganidza data rako, iwe unowana mushumo unoratidza zvakajeka nzvimbo chaiyo yeyako webhusaiti. Masosi emakwikwi anoongororwa zvakare, uye newewo unogamuchira ruzivo rwese nezve chinzvimbo chavo. SEO zviyero zvinotorwa mufungwa paunenge uchigadzira saiti mamiriro, saka iwe unomuka-kune-zuva shanduko kune yako yekugadziriswa kana iwe uchida.
Kana iwe uchitova neakavimbika account, unogona kuwedzera chero huwandu hwesaiti kune yako pachako kabati. Wese masayiti achaongororwa zvakafanana. Iko kuongorora kwekutanga kunoratidza kuti ndeapi mazwi ekushandisa. Iyo sistimu inosarudza yakakodzera chete kune zvinyorwa zvemashoko. Ndokunge, mazwi ese achange aine mhedzisiro inobatsira pakukura kwenzvimbo yekuenda kunzvimbo. Iwe unogona kudzima kana kuwedzera mamwe mazwi akakosha pakufunga kwako.
Chishoma ndechekuti isu tiongorore nzvimbo yacho uye titarise mafambiro ayo kutenderera nguva yakatarwa. Izvo zvakakosha kuti uunganidze ruzivo nezve vakwikwidzi vako. Iwe unogara uchiziva nezve zvese zviri kuitika pane avo masaiti, uye Analytics inokuudza iwe chinhanho chinoda kutora kuti upfuure mukwikwidzi mune yekutsvaga injini. Unogona kushandisa Chikumbiro Programming Interface (API), izvi zvinonyanya kufarirwa pakati pevashandisi nekuti iyo data inofananidzwa otomatiki, achibvumira kuramba uine ziso pane imwe neimwe yekuvandudza. Kune matatu emitero yemari inowanikwa mune ino chikamu chemasevhisi:
MuWebhu Development, Semalt inopa mhinduro yakazara inoreva kuti izere yezvekutengesa chero nzvimbo, nekugadzira zvikamu zvayo.
kubatanidzwa neyechitatu-bato zvikumbiro;
Yakasarudzika Management System;
nyanzvi e-commerce modules;
Yakasimudzira Mavhidhiyo Kugadzirwa
Chinhu chinosungirwa chehurongwa hwekushambadza chinoitwa apo ichivhura mapurojekiti makuru eInternet vhidhiyo inopfupisa izvo nezvibatsiro zvekambani nyowani. Sechikamu chebasa re "kukurudzira Vhidhiyo Kugadzira" Semalt anotaurira nzira mbiri dzekugadzira aya mavhidhiyo:
nesarudzo yeumwe neumwe (mutengo unoverengwa zvakasiyana).
Shanduko kubasa rekubhadhara inoitwa kubva kutsananguro yemitero yemari, kuburikidza nekudzvanya pane "Nyorera" bhatani. Kutenga mutero wemitero kunogona kugadzirwa mune chero mari yenyika. Iyo switch switchor iri munzvimbo yepamusoro fomu yekubhadhara.
Mushure mezvose zvataurwa pamusoro, zvakaoma chaizvo kusahadzika kushanda kweiyo SEO optimization neSemalt nzira. Zvichida pakawoneka mimwe mibvunzo nekuti chinyorwa hachitadza kuvhara ese nuances echinhu chakakomba kudaro. Saka, zviri nani kuti ubate iyo kambani pasina kunonoka. Nokukurumidza Semalt anonzwa kubva kwauri, iwe unokurumidza kupfuma. Isu takakumirirai!